laacib » Karim Benzema Oo Magiciisa Ku Qoray Buugaagta Taariikhda Kooxdiisa Real Madrid-Miyuu U Qalmaa Ixtiraam Ka Badan?
Gool dhaliyaha laacibkii Real Madrid ee Karim Benzema ayay xalay u ahayd habeen taariikhi ah oo aanu ilaawi doonin kadib markii uu laba gool ka dhaliyay kulankii Champions League ee ay Madrid guusha wayn ka soo gaadhay Virtoria Plzen.
Karim Benzema ayaa ku biiray liiska ciyaartoy khaas ah oo Real Madrid taariikh ka soo sameeyay wuxuuna magiciisa ku ag qoray liiska halyayo xusuus badan ku leh jamaahiirta laacibkii Madrid laakiin waxa uu wali haystaa fursad uu ku sii wadan karo. Daawo mid ka mid ah goolashii cajiibka ahaa ee uu Benzema dhaliyay.
Gool dhalinta abid ee Real Madrid waxaa 450 gool ku haya Cristaino Ronaldo oo hadda ka tirsan laacibkii Juventus waxaana kaalinta labaad ku jira xidiga rekoodhkan hore u haystay ee Raul Gonzalez kaas oo Madrid u soo dhaliyay 323 gool.
Waxaana kaalinta saddexaad ku jira halyaygii Real Madrid ee Alfredo Di Stéfano kaas oo laacibkii u soo dhaliyay 308 gool waxaana kaalinta afraad haysta Carlos Santillana oo 290 gool u soo saxiixay Los Blancos haka kaalinta shanaad uu ku jiro Ferenc Puskás oo waayihiisii dahabiga ahaa ee Madrid ku soo dhaliyay 242 gool.
Karim Benzema ayaa marar badan orin iyo eedayn badan kala kulmay jamaahiirta kooxdiisa Madrid balse waxaa xaqiiq ah in uu uga baahan yahay ixitraam ka badan inta uu hadda ka helo maadaama oo uu ku biiray liiska halyayada laacibkii magacooda sida wayn looga ixtiraamo.